Sleep နဲ့ Asleep သုံးစွဲပုံသေချာသိဖို့ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
Sleep နဲ့ Asleep သုံးစွဲပုံသေချာသိဖို့
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Friday, April 01, 2016 SayarWinNaingOo No comments
Sleep က noun အဖြစ် ..အိပ်စက်ခြင်း လို့ရော verb အဖြစ် အိပ်သည် ..လို့ရော နှစ်မျိုးရပါတယ်
Sleep can beanoun oraverb. Sleep is the natural state of rest in which you are unconscious with your eyes closed.
(1.1) I must get some sleep - I'm exhausted. (noun)
ကျနော် ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေတယ် နည်းနည်း အိပ်မှရမယ်
(1.2) I haven't been getting enough sleep recently. (noun)
ကျနော် အခုလောလောဆယ် အိပ်ရေး၀၀ မအိပ်ရသေးဘူး
(1.3) I had not slept for three days. (verb)
ကျနော် မအိပ်ခဲ့ရတာ သုံးရက်ရှိပါပြီ
asleep ကိုတော့ အိပ်ပျော်နေသော ..လို့ ယူနိုင်ပါတယ် ။ adjective ပါ ။ တစ်ယောက်ယောက်က အိပ်နေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေလျှင် sleeping ကိုသုံးနိုင်သော်လည်း asleep ကို သုံးတာက ပိုပြီးတော့ သုံးနေကျ ဖြစ်ပါတယ် ၊ အသုံးများပါတယ် ။
If someone is in this state, you can use the progressive form and say they are sleeping, but it is more common to say that they are asleep.
သူတို့ အိပ်ပျော်နေကြတယ် ..လို့ ပြောချင်လျှင်
(2.1) They are sleeping. လို့ သုံးနိုင်သော်လည်း
(2.2) They are asleep. က သုံးရိုးသုံးစဉ် ပိုကျပါတယ် (ပိုကောင်းပါတယ်)
သူအိပ်နေတယ် ၊ သူအိပ်ပျော်နေတယ် ဆိုတာမျိုးကို ..ဒီလိုမရေးပါနဲ့
Don't say, for example, 'He sleeps'.
(2.3) She was asleep when we walked in.
(3) ဘယ်လောက်ကြာကြာအိပ်တယ် ၊ ဘယ်နေရာမှာအိပ်တယ် ၊ ဘယ်လို အိပ်တယ် ..စသည်ဖြင့် ပြောချင်လျှင်တော့ sleep ကိုသုံးပါ ။ how long, where, usually how မှတ်လိုက်ပါ ။
(3.1) He slept for almost ten hours.
သူအိပ်တာ ဆယ်နာရီနီးပါးရှိပါပြီ (ကြာချိန်)
(3.2) Where does the baby sleep?
ကလေးလေးက ဘယ်နေရာမှာ အိပ်တာလဲ (နေရာ)
(3.3) I sleep late on Saturdays.
ကျနော်က စနေညတွေ(စနေညတိုင်း) မှာ နောက်ကျပြီး အိပ်လေ့ရှိပါတယ် (ဘယ်လိုအကျင့်)
(4) Be Careful! သတိထားပါ
asleep ကို verb ရဲ့နောက်မှာပဲသုံးပါတယ် ၊ V-be တွေဟာလည်း verb အုပ်စုထဲမှာ ပါတယ်လို့ သိထားပါ verb ဆိုလျှင် main verb တွေပဲ စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတတ်လို့ သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၊ asleep သည် adjective ဆိုသော်လည်း noun ရဲ့ရှေ့မှာ မသုံးပါဘူး ။
Asleep is only used afteraverb. Don't use it in front ofanoun.
Don't, for example, say 'an asleep child'. Instead use sleeping.
child က noun ဖြစ်နေတော့ asleep မသုံးပဲ sleeping ပဲ သုံးရပါမယ်
(4.1) She is carryingasleeping baby.
သူမက အိပ်နေတဲ့ကလေးလေးကို ချီထားပါတယ်
(5) asleep က adjective ဆိုတော့ grammar စည်းမျဉ်းအရဆို adv တစ်ခုရှေ့ကနေထည့်လို့ရ..ရပါမယ် ။ သို့သော်လည်း စာလုံးတချို့ကိုသာ လက်ခံပါတယ် ။
very asleep, completely asleep မရပါဘူး
sound asleep, fast asleep ..ရပါတယ်
(5.1) The baby is still sound asleep.
ကလေးလေးက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေဆဲပါ
(5.2) He was fast asleep.
သူ စိတ်ချလက်ချ အိပ်ပျော်သွားတယ်
(fast ကို လျှင်မြန်သော ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မယူပဲနဲ့ secure, sound, deep ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ သေချာရှာကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျမှ fast asleep အတွဲက sound sleep, tight sleep တို့နဲ့ ဆင်တူပဲဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ် )
(6) 'go to sleep'
နိုးနေရာကနေ အိပ်ပျော်သွားတဲ့သဘော ..အခြေအနေပြောင်းသွားလျှင် go to sleep ကို သုံးရပါမယ်
(6.1) Both the children had gone to sleep.
ကလေးနှစ်ယောက်လုံး အိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြပြီ (စောစောက ဆော့နေတာကနေ အခြေအနေပြောင်းပြီး အိပ်သွားတာကိုပေါ်လွင်စေချင်တာ)
(6.2) Go to sleep and stop worrying about it.
အဲဒီအတွက် စိတ်ပူနေတာရပ်ပြီး အိပ်လိုက်ပါ (စိတ်ပူလို့ အိပ်မရဖြစ်နေတာကနေ အိပ်ပြီး အခြေအနေ ပြောင်းသွားစေချင်တာ)
(7) 'fall asleep'
မမျှော်လင့်ပဲ ရုတ်တရက် အိပ်ပျော်သွားတယ် ဆိုလျှင်တော့ fall asleep ကို သုံးပါ
(7.1) The moment my head touched the pillow I fell asleep.
ကျနော့်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းအုံး ထိသွားတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာပဲ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်
(7.2) Mike fell asleep watching TV.
မိုက်က TV ကြည့်နေရင်းကနေ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်
(8) 'get to sleep'
ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားပြီး အိပ်ပျော်သွားလျှင်တော့ get to sleep ကိုသုံးပါ
(8.1) Could you turn that radio down – I'm trying to get to sleep.
ရေဒီယိုကို အသံလျှော့ပေးပါလား ၊ ကျနော် အိပ်ဖို့ ကြိုးစားနေလို့ပါ
(8.2) I didn't get to sleep until four in the morning.
မနက်လေးနာရီအထိ ကျနော် အိပ်လို့မရခဲ့ပါဘူး
(9) 'go back to sleep'
အိပ်နေတာကနေနိုးလာပြီး ပြန်အိပ်တာကိုတော့ go back to sleep ကို သုံးပါ
(9.1) Go back to sleep, it's only five a.m.
ပြန်အိပ်ပါ ၊ ငါးနာရီပဲ ရှိပါသေးတယ်
(10) 'send someone to sleep'
အိပ်ချင်စေတယ် ၊ အိပ်ချင်စိတ်ဖြစ်စေတယ် ..ဆိုလျှင် send (someone) to sleep ကိုသုံးပါ ။ someone နေရာမှာ Object ပုံစံဖြစ်တဲ့ me, him, her, them စတာတွေကို သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်
သူ့ကို အိပ်စေချင်လို့ ကျနော်သူ့ကို သောက်စရာပူပူလေးတစ်ခွက် ၀ယ်ပေးခဲ့ပါတယ်
ကျနော် စာအုပ်တွေကို ဖတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အဲဒါတွေက ကျနော်ကို အိပ်ချင်စေပါတယ်
ကဲ အားလုံး မဟုတ်သော်လည်း အတော်လေးစုံသွားပြီလို့ထင်မိပါတယ် ။ သတိထားရမယ့် အချက်လေးတွေက တွေ့ရနည်းတတ်လို့ သေချာမှတ်စေချင်ပါတယ် ..
ဆရာဝင်းနိုင်ဦး Facebook မှ ကူးမှကူးယူဖော်ပြသည်။